बाँदर आतङ्कबाट मुक्ति पाउन जङ्गलमा फलफुल रोपिँदै ! - Jhilko
गृहपृष्ठ ∕ प्रदेश ∕ गण्डकी प्रदेश ∕ बाँदर आतङ्कबाट मुक्ति पाउन जङ्गलमा फलफुल रोपिँदै !
बाँदर आतङ्कबाट मुक्ति पाउन जङ्गलमा फलफुल रोपिँदै !
झिल्को डटकम २०७७, चैत्र १७ गते १३:२९ मा प्रकाशित
तनहुँ, १७ चैत । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका २ का श्यामलाल श्रेष्ठ बाँदर आतङ्कले हैरान छन् । बाँदरले खेतबारीमा आएर बाली खाइदिने गरेपछि उनी मात्र होइन उमाचोकका अधिकांश कृषक पीडित छन्।
सबडिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख मनोज रानाभाटले तनहुँमै पहिलोपटक उमाचोकमा बाँदर भुलाउन जङ्गलमा फलफूलको बिरुवा रोपण गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘बाँदरले आफ्नो आहाराको अभावमा किसानको खेतीबाली नष्ट गर्ने तथा मानिसलाई नै आक्रमण गर्ने समस्या न्यूनीकरणका लागि फलफूलका बिरुवा लगाउन लागेका हौँ’, रानाभाटले भने।
यस कार्यक्रमका लागि डिभिजन वन कार्यालय तनहुँले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने २० प्रतिशत सामुदायिक वनले लागत साझेदारी गर्नेछ । सामुदायिक वनको तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब ८४० वटा विभिन्न प्रजातिका वनजन्य फलफूलको बिरुवा रोपिनेछ । ‘बुट्यान जङ्गलमा बाँदरले मन पराउने बर्सेनि उत्पादन हुने खालका बिरुवा लगाइनेछ, त्यसका लागि जग्गा मिलाउने, तारबार गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने ।
उनका अनुसार यहाँ काफल, चिउरी, जामुन, अमला, लोकल आँपहरु, कटहर, चिलीलगायतका बिरुवा उत्पादन गरिनेछ । दुई तीन वर्षमा फलफूल उत्पादन हुने भएपछि बाँदर जङ्गलमै भुल्ने र बस्तीसम्म नजाने विश्वास गरिएको छ । ‘म्याग्देका विभिन्न ठाउँमा बाँदर आतङ्क छ, त्यसमध्ये पनि उमाचोकमा बढी नै आतङ्क रहेको पाइयो’, रानाभाटले भने, ‘विगतमा धेरैपटक खेतबारीमै गएर महिलालाई आक्रमण गर्ने गरेको घटना छ ।’
म्याग्देमा बाँदरले दुःख दिन थालेपछि गएको वर्ष गाउँपालिकाले कृषकलाई बाँदर भगाउने उपकरण प्रदान गरेको थियो तर त्यस उपकरण प्रभावकारी नभएको कृषकको भनाइ छ । म्याग्दे गाउँपालिका १ का कृषक एककुमार श्रेष्ठले बाँदरले बारीमा पसेर सबै बाली नष्ट गरिदिने गरेको गुनासो गरे । म्याग्दे गाउँपालिका २ का कृषक बुद्धिबहादुर मगरले बाँदरले दुःख दिएपछि दिनभर बारी कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
क्याटेगोरी : रोचक, गण्डकी प्रदेश
ट्याग : #hot, #monkey
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रक्रियाबाट भागे
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता संकटमा